उपचार नपाई मृत्यु, मृत्युपछि उपचारको नाटक ! – आफ्नो समाचार
उपचार नपाई मृत्यु, मृत्युपछि उपचारको नाटक !
Afno News — ३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०५:४६0comment
बुटवल । नेपाल सरकारले गरिबी असायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भनेर प्रचार प्रसारमा मात्र लाखौको बजेट खर्च गर्ने गर्दछ । तर बुटवल स्थीत लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा टिकट काट्ने पैसा जुटाउन नसक्दा अस्पतालको गेटमा नै एक गरीब वृद्धले ज्यान गुमाएका छन् ।
औचित्यहीन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कहिले खारेज हुने ?
Narayangadh-Muglin Road Blocked By Landslides
मोतिबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया
थुलुङदुधकोशीमा निर्माण हुने नमुना वस्तीकोे अन्तिम डिपिआर तयार